/ Products / Qaar kale waxay / Afka Turinabol (Oral Tbol) budada
Rating: SKU: 2446-23-3. Category: Qaar kale waxay
Product Name: Dufanka turinabol ee afka
Lambarka CAS: 2446-23-3
Color: Biyo-cadeyn ah
1. waa maxay Turinabol afka laga qaato (Tbol) budada?
Oral Turinabol (Tbol) waa steroid anabolic si fiican loo yaqaan. Dhab ahaantii waa Dianobol (nooca fuuqbaxa ee testosterone) oo leh 4- chloro modification oo caadi ahaan loo yaqaan Tbol afka. Magaceeda kiimikaad waa 4-chlorodehydrometyltestosterone. Waxaa soo saaray saynisyahano ku sugan Jarmalka Bari waxayna caan ku noqotay iyada oo ay ugu wacan tahay sii deynta British Dragon.
Si ka duwan mid kasta oo kale oo androgenic steroids anabolic ee la isku duro, turinabol afka ah (Oral Tbol) waxaa lagu cuni karaa afka. Turinabol-ka afka (Oral Tbol) waxa uu leeyahay qaab budo ah iyo kaabsal, sida caadiga ah qaabka kaniiniyada.
Budada Turinabol ee afka waxaa badanaa lagu tilmaamaa inay leedahay hanti meel u dhaxaysa Dianabol, iyo Anavar.
2. Waa maxay faa'iidooyinka budada Turinabol Oral?
Markaad ogaato inta ay le'eg tahay budada Turinabol ee afka laga qaato iyo muddada, waxaad bilaabi kartaa wareeggaaga si kalsooni leh! Budada afka laga qaato ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso dhisidda muruqyo waaweyn, kor u qaad xooggaaga, oo wanaaji waxqabadkaaga. Muhiimadu waa inaad ka iibsatid budada turinabol ee afka dhabta ah alaab-qeybiyaha si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka kale ee aad filan karto inaad aragto waxaa ka mid ah:
Faa'iidooyinka budada turinabol ee afka si kor loogu qaado Stamina iyo Adkeysiga
Qiyaastii laba toddobaad gudahood wareeggaaga TBol ee afka ee shanta toddobaad ee lagu taliyey ee qiyaasta maalinlaha ah ee 80mg, waxaad ka yaraan doontaa daal inta lagu jiro jimicsiga xooggan.
Soo kabashadaada ka dib fadhi kasta oo adag ayaa sidoo kale si weyn u fiicnaan doona sidoo kale. Bedelkii tababarka laba ilaa saddex maalmood todobaadkii, waxaad awoodi doontaa inaad sameyso jimicsi aad u sarreeya lix maalmood oo toos ah.
Budada turinabol ee afka laga qaato ayaa faa'iido u leh kor u qaadida koritaanka murqaha
Fududeynta korriinka muruqa waa mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee budada Turinabol Oral. Waxay si gaar ah caan ugu tahay dhisayaasha jir-dhisayaasha ujeeddadeeda. Waxqabadka cayaaruhu wuxuu inta badan ku tiirsan yahay xoog taasoo iyana laga heli karo muruqyo waaweyn iyo kuwo waaweyn.
Budada Tbol ee afka waxay noqon kartaa wax la mid ah Dianabol laakiin waxay noqon kartaa mid waxtar leh sida wakiilka bulking inta badan kiisaska. Ka dib usbuuca labaad ee shanta toddobaad ee wareegga wareegga afka ee turinabol, muruqyadaadu waxay noqonayaan kuwo aad u muuqda. Waxa wanaagsan ee ku saabsan xaruntan, waa in ay si joogto ah kor ugu qaaddo murqahaaga. Waxa xun ee arrintan ku saabsan ayaa ah in ay xanuun ku noqon karto qaar ka mid ah jidh-dhisayaasha. Kubka iyo dhabarka murqahaagu waxay kor u qaadaan ilaa xad aan caadi ahayn xitaa marka aanad ku lug lahayn jimicsiyo xooggan.
Budada turinabol ee afka laga qaato waxay kordhisaa qallayl murqaha iyo xididdada dhiigga
Marka lagu daro murqaha muruqyadaada, budada Turinabol Oral Turinabol kama buuxin doonto muruqyadaada biyo, sida kiiska Dianabol. Taa baddalkeeda muruqaagu waxay noqdaan kuwo qalalan oo xididdada dhiigga ayaa noqda kuwo dabiici ah. Tani waxay badanaa ka bilaabataa toddobaadka labaad ee isticmaalka, marka xididdadaadu ay aad u muuqdaan marka muruqyadaadu kor u kacayaan.
Usbuuca saddexaad ama afraad, heerka xididdada murqahaagu wuu kordhi doonaa, laakiin maaha heerar qosol leh (sidaa darteed ha welwelin).
Budada turinabol ee afka laga qaato ayaa faa'iido u leh Goynta Wareegga
Tiro dad ah ayaa isticmaala budada Turinabol Oral inta lagu jiro wareegga buskudka halka qaar ka mid ah laga yaabo inay isticmaalaan inta lagu jiro wareegga goynta. Waa sababtoo ah budada turinabol afka waxay isku daydaa inay door muhiim ah ka ciyaarto caawinta dheef-shiid kiimikaadkaaga. Sida jidhku u gubo kalooriyooyinka xawliga degdega ah, markaa jidhku wuxuu yeelan karaa awood uu ku gubo unugyada baruurta si uu u huriyo dadaalka jimicsiga inta lagu jiro wareegga goynta. Si ka duwan sida steroids kale, budada Turinabol Oral waxay u dhaqmi kartaa sidii steroid anabolic oo kala duwan, taas oo loo isticmaali karo bulking iyo goynta labadaba.
Budada turinabol afka waxay faa'iido u leedahay Murqaha Leaner
Si la mid ah steroids kale, budada Tbol Oral waxay ka caawisaa dhisayaasha jirka si ay u helaan cufnaanta muruqa. Si lagaaga caawiyo inaad hesho murqaha caatada ah, budada Turinabol ee afka ayaa kor u qaadi doonta haynta nitrogen ee murqaha iyadoo sidoo kale kordhinaysa RBC iyo sidoo kale borotiinka. barar kuu keena.
Turinabol budada afka ah faa'iidooyinka kor u qaadida niyadda
Mid ka mid ah saameynta kale ee wanaagsan ee budada Turinabol Oral waa in ay ka caawiso kor u qaadida niyaddaada. Dareenkaas kor u qaadista ah ee aad u baahan tahay si aad u geliso wakhtiga loo baahan yahay si aad u dhamaystirto fadhigaaga jimicsiga ayaa aad muhiim u ah. Haddii aadan ku jirin maskaxda saxda ah si aad u gasho kulan tababar, waxaad ku adkaan doontaa inaad ku guulaysato dhisme ahaan. Si kastaba ha noqotee, adoo socodsiinaya wareegga turinabol Oral, niyaddaadu waa la wanaajiyey oo waxaad si fiican u awoodaysaa inaad ku shaqeysid xamaasadda loo baahan yahay si loogu guuleysto dhismaha jirka.
Maadaama budada turinabol ee afka laga qaato ay tahay steroid afka, waxaad si fudud ugu liqi kartaa biyo. Kiniinada afka laga qaato ee turinabolka ayaa diyaar ah oo cabirkoodu le'eg yahay kaniiniyada looma baahna in dhiigaaga lagu duro. Si aad u iibsato Turinabol Oral ee foomka budada ah, waxaad ka iibsan kartaa alaab-qeybiyaha budada turinabol Oral. Waxaad ka iibsan kartaa budada turinabol afka si aad u hesho qiimo wanaagsan.
Ka hortagga Gynecomastia iyo faa'iidooyinka kale.
Inkasta oo ay tahay mid ka soo jeeda Dianabol (Dbol), budada Turinabol ee afka looma qurxinayso estrogen. Sidan oo kale, uma baahnid inaad ka walwasho dhibaatooyinka soo raaca ee aromatization, oo ay ku jiraan:
▪ Unugyada naaska oo weyn (gynecomastia)
▪ Haysashada biyaha
▪ Dhiig karka
3. Dhibaatooyinka ay keento budada turinabol afka
Isticmaalayaal badan ayaa aaminsan in budada turinabol ee afka laga qaato ay ka khatar yar tahay dianabol. Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay waxyeellooyinkeeda, kuwaas oo ah kuwan soo socda:
Dhibaatooyinka soo raaca Androgenicsida finanka iyo timaha oo ka daata ragga inkasto aan la dareemin iyo virilization haweenka haddii qadar sare la qaato
Kordhinta kolestaroolka xun wuxuuna hoos u dhigay kolestaroolka wanaagsan
Cadaadiska testosterone sida muddada, qiyaasta, iyo steroids kale ee wareegga
Sunta beerka waxay si toos ah u dhigantaa dhererka wareegga iyo qiyaasta
Niyad jimicsiga - Oral Turinabol owder, sida khamriga uu saameyn ugu yeelan karo niyaddaada. Isbeddelka niyadda ayaa ah saameynta ugu badan ee dhinac kasta oo steroids ah iyo Tbol Oral sidoo kale maaha mid ka reeban sharcigan. Dhammaan isbeddelladan niyadda ayaa dhammaantood ah sababtoo ah hormoonka sida steroids ayaa la filayaa inay saameyn ku yeelato. Waxaad noqon kartaa mid dagaal badan oo xanaaq badan sida dhowr sakhraan ah.
Maqaarka Caleen-In kasta oo budada Turinabol Oral ay is barbar dhig ka yar tahay androgenic marka loo eego steroids kale ee anabolic, waxay sidoo kale keeni kartaa waxyeelooyinka androgenic. Dhibaatooyinka soo raaca waxaa laga yaabaa inay sababto sababtoo ah qiyaasta sare ama laga yaabee haddii aad si gaar ah ugu nugul tahay noocaan. Budada Turinabol ee afka laga yaabaa inay sidoo kale kordhiso dheecaanka Sebum kaas oo keeni kara maqaarka dufan leh taas oo markaa u horseedi karta finan daran.
Dhibaatooyinka kale ee budada turinabol ee afka
Waxyeellooyinka kale ee ugu badan ee androgenic waxay noqon karaan bidaarta qaabka ragga iyo koritaanka timaha aan loo baahnayn ee jirka, gaar ahaan dhabarkaaga.
FDA ayaa sidoo kale ku talisay, alaabtan oo kale waxay runtii khatar u noqon karaan caafimaadkaaga. Waxaa guud ahaan lagugula talinayaa in aad doorato steroids sharci ah ama waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qaar ka mid ah beddelka SARM-yada ugu fiican kuwaas oo noqon kara beddelka weyn ee steroids anabolic.
4. Intee in le'eg ayay tahay in aad qaadatid Tbol afka laga qaato maalin kasta? Qiyaasta turinabol afka?
Sida loo isticmaalay tobanaan sano si loo horumariyo waxqabadka ciyaaraha fudud, cilmi-baarayaashu hadda waxay ogyihiin heerarka budada Turinabol Oral waa in la maamulaa si loo gaaro natiijooyinka ugu sarreeya. Waxay og yihiin in celceliska qiyaasta qiyaasta u dhaxaysa 20 iyo 50 mg, oo leh qadarka saxda ah ee kala duwan oo ku salaysan duruufaha shakhsi ahaaneed.
Sidan oo kale, waxaa suurtogal ah in la garto qaddarka ugu waxtarka badan ee aad qaadan karto. Tani waxay kaa caawinaysaa yaraynta khatarta ah inaad si qalad ah u liqdo wax ka badan inta lagu taliyey.
Inta badan isticmaalayaasha ugu horreeya ee ka tirsan beerta jir-dhisidda waxay door bidaan bilawga 20 mg maalintii muddo afar toddobaad ah wareeg ah. Isticmaale steroid khibrad leh ayaa laga yaabaa inuu isticmaalo ilaa 50 mg maalintii muddo lix toddobaad ah.
Waxaad u baahan tahay inaad taxaddar muujiso oo aad ogaato waxa adiga iyo yoolkaaga kuu shaqaynaya. Waa caqli-gal in lagu bilaabo qiyaas hoose halkii aad ka qaadan lahayd mid sare. Qiyaaso kala duwan ayaa lagula talinayaa ragga iyo dumarka, kuwaas oo ah sida soo socota:
Bilawga: 30 ilaa 40 mg maalintii
Dhexdhexaad: 50 ilaa 80 mg maalintii
Jir-dhiseyaasha sare: 80 ilaa 100 mg maalintii ugu yaraan
Dumarka: 5 ilaa 10 mg maalintii (tani sidoo kale waa qiyaasta qiyaasta dhexdhexaadka ah ee guud)
Fiiro gaar ah: Qiyaasta budada turinabol ee afka ee dhabta ah waxay kuxirantahay sida jidhkaagu ugu dulqaadanayo steroidkan. Kaliya maskaxda ku hay in qiyaasta sare ay ka dhigan tahay halis dheeraad ah oo la kulma saameynaha.
5. Turinabol budada afka ee Daaweynta Wareegga Kadib (PCT)
Qaar ayaa laga yaabaa inay soo jeediyaan isticmaalka budada Tbol afka la'aanteed PCT. Laakiin waa in aan tixgelinno in heerka testosterone uusan ku soo laaban sidii caadiga ahayd PCT la'aanteed. Markaa, waa in aanay jirin meel khatar ah.
PCT caadi ahaan waxaa ku jira qaadashada Clomid laba toddobaad ama qaadashada Nolvadex maalin kasta oo khafiif ah (20 mg). Iyadoo ku xiran xeryahooda kale ee loo isticmaalo in lagu dhejiyo budada turinabol ee afka iyo sida ay u adag yihiin inay ku xakameynayaan testosterone ee jirka, oo ay ku jiraan Human Chorionic Gonadotropin (HCG) waxay noqon kartaa tallaabo xigmad leh.
Muddada PCT-gaagu waxay ku xidhan tahay isteeroid-yada kale ee aad isticmaashay. Caadiyan, waa muddo afar ilaa lix toddobaad ah. Sida budada turinabol afka waa mid aad u khafiif ah oo aan aromatizable ahayn, looma baahna isticmaalka aromatase inhibitors.
6. budada turinabol afka vs Anavar
Budada turinabol afka iyo Anavar waa isku mid, iyadoo labadoodaba ay yihiin kuwa afka laga qaato iyo xeryahooda aan istrogenic ahayn.
Labaduba waxay kor u qaadaan cufnaanta muruqa caatada ah, guulaha xoogga iyo khasaare baruurta.
Si kastaba ha ahaatee, saamaynta turinabol ee afka ayaa la rumeysan yahay in ay wax yar ka sii caddeeyey marka la barbar dhigo Anavar, sidaas Oral Tbol laga yaabaa in gees ah marka la eego muruqa iyo guulaha xoog.
Dhinaca kale, Turinabol Oral waxay keeni kartaa waxyeelo yar oo ka badan Anavar, sida isbeddelka sare ee kolestaroolka, ALT / AST enzymes beerka iyo xakamaynta testosterone dheeraad ah.
Isticmaalayaasha qaarkood waxay soo jeedinayaan in Turinabol Oral uu keeno fuuq-baxa dheecaanka synovial ka yar, sidaas darteed si wadajir ah oo saaxiibtinimo ka badan Anavar (iyo Winstrol). Tani waxay dan u noqon kartaa dhisayaasha jir-dhisayaasha kuwaas oo sameeya ku celcelin yar, oo qaadaya miisaan culus.
Anavar waa steroid-saaxiibtinimo dumar ah in dhif soo saartaa saamaynta virilization, iyo la mid ah waxaa laga yaabaa in runta Turinabol.
Si kastaba ha ahaatee, ay sabab u tahay Turinabol ee wax yar ka badan dabeecadda ka xoog badan, waa cadaalad ah in ay qaataan in Anavar waa xarun ammaan ah haweenka. Tan iyo markii la abuuray Anavar ee 1962, waxaa jira cilmi-baaris dheeraad ah oo la heli karo oo ku saabsan saamaynta ay haweenka; oo lagu daray in maanta loo isticmaalo daawada.
Budada Turinabol ee afka si kastaba ha ahaatee ma aha FDA-loo oggolaaday in lagu daaweeyo cudur kasta oo catabolic ah oo ay dhif u tahay haweenka miisaanka qaada; taasoo ka dhigaysa mid aan la fahmin.
7. Budada Turinabol ee afka laga qaato vs dianabol
Budada turinabol ee afka laga qaato waa Dianabol, laakiin kuma koobna oo kaliya in ay noqoto mid daciif ah oo ka mid ah steroid-ka caanka ah - waxay leedahay hanti u gaar ah iyo isticmaalka, sidoo kale. Sida steroid daciif ah, khataraha waxyeelladu maaha kuwo aad u halis ah, oo laga yaabo inay yar yihiin gebi ahaanba. Isticmaalka budada turinabol ee afka marka dhisidda jirka ay kordhin doonto xooggaaga iyo murqahaaga, laakiin sababtoo ah dabeecadeeda daciifka ah, waxaad u badan tahay inaad u baahan tahay inaad bilowdo qiyaas dhexdhexaad ah si aad u aragto natiijooyinka, halkii aad ka bilaabi lahayd sida ugu yar ee suurtogalka ah.
8. Reviews budada turinabol afka
Waligay ma ordin wax ka badan hal mayl noloshayda. On 50mg ee tbol afka ah waxaan ku orday 3 mayl ka dibna waxaan u baxay xoogaa squats. Waxaan ku orday dbol 30mg / maalin sidoo kale labadii toddobaad ee ugu dambeeyay ee wareegga 6 toddobaad ee Tbol. Ku jebiyay PRs fadhi kasta oo jimicsi oo wali waxay u ordi karaan sidii faras oo Dbol xun igu dhex jirto. Waxyaabo cajiib ah, waxay la socon doontaa wax kasta.
Mid ka mid ah afafka aan jeclahay. Inkasta oo laga yaabo in aanay xidhin feer weyn sida Superdrol ama aad hoos sida Anavar, waxa ay u muuqataa in ay wax walba u shaqeeyaan in aad u fiican. Maaddaama ay sii deyso testosterone badan, sababtoo ah wax yar oo ku xiran SHBG, waxay si weyn u shaqeysaa Imtixaanka; oo xitaa si ka sii wanaagsan inta iskudhisyada badan ee aad isku dhejiso.
"wareegteyda turinabol afka ee ugu horeysay, waxaan la kulmay bambooyin todobaadkii labaad laftiisa. Natiijooyinka dhisidda murqaha ayaa si fudud ii ahaa yaab. Isla markiiba, qaadista miisaanku waxay noqotay mid fudud waxayna awooday inay si fiican u seexato. Waxaan qaatay 12 toddobaad laakiin wax saameyn ah oo aan la kulmin la kulmin."
"Super la hooseeyey. Aniga ahaan, Oral tbol waxay i siisay faa'iidooyin nadiif ah oo wanaagsan. Kursigaygu wuxuu u kacay si joogto ah 5 rodol usbuuc kasta iyo faa'iidooyinku way hadheen ka dib markii ay istaageen. Dadku had iyo jeer waxay yidhaahdaan waa Dbol walaalkeed ka yar laakiin Dbol waan joojiyay oo Tbol baan ku noqday, waayo faa'iidadu waxay ila mid ahayd marka laga reebo TBOL, biyo la'aana ma jirin, Estrogen-kaygana cirka iskuma shareerin."
9. Budada turinabol afka iibka ah - Halkee laga iibsan karaa budada Tbol Oral?
Budada turinabol ee afka laga qaato ayaa diyaar u ah online. Si kastaba ha noqotee, nadiifinta heerka sare waa in laguu xaqiijiyo inaad hesho natiijooyinka la filayo. Tixgeli dib u eegista budada Oral Tbol ee isticmaalayaasha si aad u hesho fikradaha ugu fiican ee kaabsal turinabol Oral ama supplements budada ah.
Sida dheeriga kale, way wanaagsan tahay in la tixgeliyo dhibaatooyinka soo raaca ee turinabol afka laga yaabo inay dhacaan oo la qaado taxadarka lagama maarmaanka ah.
Isticmaalayaal badan oo Tbol afka ah ayaa ka soo iibsada alaab-qeybiyeyaasha steroid ee la ansixiyay kuwaas oo bixiya budada Tbol afka ah oo iib ah oo tayo sare leh.
Markaad tixgeliso isticmaalka budada Oral Tbol ka iibso shirkadaha bixiya budada turinabol Oral ee iibka ah ee tirada badan si aad ugu raaxaysato qiimaha jaban.
10. FAQ ee budada turinabol afka
Intee in le'eg ayaa la ordayaa Oral Tbol?
Wareegga ugu habboon ee budada Turinabol Oral waa lix toddobaad. Xirfadlayaasha waxay soo jeedinayaan inaysan dhaafin marinka 6 toddobaad marka la haysto Turinabol Oral.
Lix usbuuc ka dib, waxaa jira fursad sare oo sun ah beerka. Tbol afka waa C17 Alpha-Alkylated compound. Aad bay ugu suntan beerka. Tbolka afka ayaa ka hortagaysa celceliska awoodda beerka si uu u habeeyo kolestaroolka si sax ah, sidaas awgeed kordhinta heerka kolestaroolka ee aan loo baahnayn ee dhiigga ku jira ayaa dhacaya. Markaa wareegga afka dheer wuxuu u keeni karaa dhaawac daran beerkaaga.
Ma budada turinabol afka waa Sharci?
Budada turinabol ee afka waa walax mamnuuc ah. Hay'adda Ka-hortagga Doping-ka Adduunka (WADA) ayaa ku leh liiska walxaha mamnuuca ah. Waddamada intooda badan waxay ka dhigeen afka laga qaato sharci darro in la isticmaalo lana iibiyo.
Intee in le'eg ayay budada turinabol ee afka ku sii jirtaa nidaamkaaga?
Budada turinabol ee afka ayaa la raadinayey saacadaha 12 ilaa 18 bilood. Runtii waxay ku xidhan tahay bayoolajigaaga.
Nasiib darro, maadaama kani yahay steroid aan lagu talineynin isticmaalka ballaaran, tan laguma baran in nagu filan si aan ku siinno tirooyin sax ah.
Ma budada turinabol afka waxay keentaa timo lumis?
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ilaha laga soo xigtay aragtida aragtida, tani waxay ka dhigan tahay in budada turinabol ee afka laga qaato aysan keeni doonin wax timo ah haba yaraatee, waxaana si ballaaran loo tixgeliyaa inay tahay badeecada ugu badbaadsan ee nooceeda ah ee suuqa.
Waa maxay budada Turinabol afka ee Half Life?
Nolosha barkeed ee Turinabol afka waa 16 saacadood. Qaadashada hal mar maalintii ayaa ka badan ku filan.
Tani waa wakhti aad u dheer oo loogu talagalay steroid-ka afka, iyada oo la tixgelinayo 16 saacadood ka dib waxay weli ahaan doontaa awood badhkeed.
 Putkaradze N, Hartz P, Hutter MC, Zapp J, Thevis M. 24 Seb;46:1. doi: 2021/j.jsbmb.212. Epub 105927 Jun 10.1016. PMID: 2021.105927
 Schiffer L, Brixius-Anderko S, Hannemann F, Zapp J, Neunzig J, Thevis M, Bernhardt R. "Metabolism of Turinabol Oral ee Human Steroid Hormone-Synthesizing Cytochrome P450 Enzymes." Daawada Metab Dispos. 2016 Feb; 44 (2): 227-37. doi: 10.1124/dmd.115.066829. Epub 2015 Dec 9. PMID: 26658226
 Kratena N, Pfeffer S, Enev VS, Gmeiner G, Gärtner P. "Synthesis of human-term metabolites of dehydrochloromethyltestosterone iyo oxymesterone." Steroids 2020 Dis; 164:108716. doi: 10.1016/j.steroids.2020.108716. Epub 2020 Agoosto 26. PMID: 32860782
 DOERNER G. "[4-CHLORO-DELTA-1-METHYLTESTOSTERONE (ORAL TURINABOL), oo ah istaraatiijiyad cusub oo afka ah oo wax ku ool ah]." Dtsch Gesundheitsw. 1965 Abril 15;20:670-4. PMID: 14304129
 Wegner H, Porzig E, Spengler B." Z Gesamte Inn Med. 4 Nov 1965;15(20):Suppl:22-187. PMID: 9
 Froehner M, Fischer R, Leike S, Hakenberg OW, Noack B, Wirth MP. "Intrasticular leiomyosarcoma ee nin dhalinyaro ah ka dib qiyaasta sare ee doping with Oral-Turinabol: warbixin kiis." Kansarka. 1999 Oct 15;86(8):1571-5. doi: 10.1002/(sici)1097-0142(19991015)86:8<1571::aid-cncr26>3.0.co;2-c. PMID: 10526287
 Petzold H, Matzkowski H, Burckhardt M. "[Saamaynta turinabolka afka ee thioacetamide cirrhosis ee beerka jiirka]." Dtsch Z Verdau Stoffwechselkr. 1969;29 (3): 127-32. PMID: 4245219
 Hinkel GK. "[Isticmaalka"Oral-Turinabol" ee caafimaadka carruurta]." Dtsch Gesundheitsw. 1966 Abril 14;21 (15):703-7. PMID: 5928574